Torohevitra poker tsara indrindra ho an'ny vao manomboka - Victor Mochere
Afaka mahita toro-hevitra poker maro isika milaza hoe inona no tsara sy inona, fa raha te hianatra tetikady poker sy hahazoana tombony ity lalao ity dia mila manavaka izay tokony hianaranao ianao amin'ny fiandohan'ny dianao. Raha vao manomboka ianao, ity lahatsoratra ity dia hamonjy anao fotoana sy vola be eny an-dalana. Nandalo ny dingana rehetra izahay nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'ny nilalao poker matihanina mba hivelomana.
Ireto ny torohevitra poker tsara indrindra ho an'ireo vao manomboka.
1. Ianaro ny fitsipika, ny toerana ary ny laharan'ny tanana poker
2. Atombohy amin'ny tsatòka ambany mba hahatakarana ny paikady poker
3. Mitadiava lalao tsara indrindra
4. Milalao mafy nefa mahery setra
5. Ampiasao ny toerana
6. Manomboka milalao latabatra iray
7. Milalao ihany rehefa mahatsapa tsara ianao
8. Mianara poker odds
9. Eritrereto ny karatra mpifanandrina aminao
10. Makà fotoana
11. Aza bluff loatra
12. Mianara miforitra
13. Mampiasà rindrambaiko
Mazava ho azy fa ity no dingana voalohany tianao hatao ary fantatry ny ankamaroan'ny mpilalao izany. Na dia mety ho mora aza ny fianarana fitsipika poker ankapobeny, tokony handany fotoana kely ianao amin'ny fahafantarana hoe inona ny laharan'ny tanana poker. Tsy tokony ho eo amin'ny toerana misy anao eo afovoan'ny tanana ianao ary tsy maintsy mieritreritra hoe mikapoka mahitsy amin'ny flush ianao na tsia ary mandany ny fotoana fanapahan-kevitrao sarobidy amin'izany. Toy izao ny filaharan'ny tanana poker:
Tabilao laharan'ny tanana poker
Tena sarobidy ny toerana fianarana ary tsy tokony hanomboka hilalao ianao alohan'ny hanaovana izany. Efa naheno angamba ianao, na dia tsy nilalao teo aloha aza, dia tena zava-dehibe amin'ny poker izany toerana izany. Iray amin'ireo toro-hevitra poker manan-danja indrindra tokony hianaranao rehefa manomboka. Aza hadino àry izany. Amin'ny ankapobeny, raha manana toerana amin'ny mpilalao hafa ianao dia midika izany fa manaraka azy ireo ianao ary afaka mahita izay ataony alohan'ny handraisanao fanapahan-kevitra.
Ity dia ampahany lehibe amin'ny fampahalalana, izay azonao dinihina. Ho fantatrao raha miloka izy ireo na manamarina, mandra-pahoviana izy ireo handray fanapahan-kevitra ary inona ny habeny ampiasainy. Ohatra, ny fahitana ny mpifanandrina amin'ny fisavana haingana dia mety ho famantarana tsara fa malemy ny tanany ary afaka manapa-kevitra ny hanambaka ny fahalalanao ianao. Misy ohatra maro tahaka ity iray ity, saingy zavatra iray no mazava - tsara kokoa ny mahita izany fampahalalana izany toy izay omena ny mpifanandrina aminao.
Rehefa vonona ny hianatra paikady poker ianao dia tadidio fotsiny fa ny fananana toerana dia zava-dehibe amin'ny lalao poker ary tokony hilalao tanana bebe kokoa ianao rehefa eo amin'ny toerany. Ny tanana izay tapa-kevitrao hilalao dia misy fiantraikany betsaka amin'ny toerana misy anao. Ny toerana misy anao any aoriana no betsaka ny tanana azonao sokafana ary mametraka tsindry bebe kokoa amin'ny mpifanandrina aminao.
Royal Flush - Ny Royal Flush dia vita avy amin'ny Ace, King, Queen, Jack, 10, mitovy akanjo
Dingana tsotra – Ny Straight Flush dia karatra dimy misesy, mitovy akanjo avokoa
Four of Kinds – Ny Four of a Kind dia karatra mitovy amin'ireo akanjo efatra
Trano feno - Ny Trano Feno dia mpivady miampy telo karazana amin'ny tanana iray
kabone - Ny Flush dia karatra dimy mitovy akanjo, fa tsy amin'ny filaharan'ny isa
Mahitsy – Ny mahitsy dia karatra dimy amin'ny filaharan'ny isa, fa tsy mitovy
Fomba telo - Three of a Kind dia karatra telo amin'ny iray ary karatra roa tsy mitambatra
Paroa roa - Two Pair dia fampiratiana roa samy hafa na andiana karatra mitovy amin'ny tanana iray
Pair iray – Iray Pair dia fampiarahana amin'ny karatra iray ihany
Karatra ambony - Ny Karatra avo dia manondro tanana tsy misy karatra mifanentana
Raiso foana ity toro-hevitra poker ity alohan'ny hitsambikina amin'ny lalaonao. Mpilalao maro no tsy liana amin'ny lalao ambany, fa mila mahita ianao fa ny tanjonao dia ny hianatra paikady poker ary tsy handany vola rehefa manao izany. Noho izany, manana antony vitsivitsy hanombohana amin'ny tsatòka ambany ianao:
Voalohany, hahatsapa ho mahazo aina kokoa ianao amin'ny fahafantaranao fa tsy mampidi-doza ny vola be ianao ary na dia very aza ny sasany amin'ny voalohany dia tsy handratra anao izany. Ho afaka hianatra ny lalao ianao ary tsy handany vola be amin'ny dingana ka hevitra tsara izany
Faharoa, mitombo ny haavon'ny fahaizan'ny mpilalao isaky ny miakatra tsatòka ianao. Ny fanombohana amin'ny fetra farany ambany dia ahafahanao milalao amin'ireo mpilalao malemy indrindra ary mianatra ny lalao fa tsy manome vola ho an'ireo izay tsara kokoa amin'izao fotoana izao.
Farany, ahafahanao mahita ny sary manontolo ary mahatsapa ny endriky ny lalao manontolo. Ho azonao ny toerana, inona ny tanana poker tokony holalaovinao ary afaka mandray ny zava-drehetra amin'ny fampiharana
Alohan'ny hiakatra dia mila mianatra paikady poker ianao ary ataovy azo antoka fa mahazo aina ianao amin'ny lalao rehetra ataonao.
Ity dia mifandray kely amin'ny tendrony teo aloha amin'ny fanombohana amin'ny tsatòka ambany, fa ny fitadiavana ny lalao tsara indrindra dia hanampy anao bebe kokoa sy hampitombo ny EV anao. Tsy misy toerana ho an'ny ego amin'ny poker, ary raha mifikitra amin'ny mpilalao tsara kokoa ianao dia ho resy. Tsotra toy izany. Na dia mpilalao faha-10 tsara indrindra eran-tany aza ianao nefa tohizo hatrany ny ady amin'ireo sivy tsara noho ianao, dia ho rava ianao na ho ela na ho haingana.
Raha ny marina, tena zava-dehibe ho an'ny mpilalao poker rehetra izany, na dia tsara toy inona aza izy ireo satria izany no hamaritra ny taham-pandresenao. Ambonin'izany, dia hanana savily kely kokoa ianao amin'ny lalao tsara kokoa ary ho afaka hiakatra haingana kokoa ny tsatòka, izay tombony lehibe ho azy manokana. Raha tsy azonao antoka ny fomba hahitana ny lalao tsara indrindra, ireto ny torohevitra tsara indrindra ho anao:
Mitadiava lalao tsara indrindra ho an'ny endrikao (tsara kokoa ny efitrano sasany ho an'ny lalao vola ary ny hafa ho an'ny MTT)
Fikarohana rehefa mahita fifamoivoizana be indrindra sy mpilalao fialamboly bebe kokoa ianao
Mitadiava ny safidy tsara indrindra misy ao amin'ny firenenao mba ho azo antoka rehefa milalao sy miaro ny volanao
Mpilalao am-pitiavana maro no manao fahadisoana lehibe amin'ny filalaovana midadasika sy fanokafana tanana Texas Holdem be loatra. Ny fanalahidy rehefa manomboka ianao dia ny milalao ny tananao matanjaka indrindra mba hitazonana ny satan'ny poker VPIP anao amin'ny lafiny ambany ary hialana amin'ny fanapahan-kevitra henjana maro aorian'ny flop. Izany dia hamela anao hilalao kely kokoa, fa mahery setra kokoa rehefa manapa-kevitra ny handray ny tananao. Ny ankamaroan'ny mpifanandrina aminao amin'ny lalao ambany dia hilalao tanana kisendrasendra matetika ary ny fakana an'io tendro poker io irery dia hamela anao hanomboka mialoha azy ireo.
Amin'ny fampiasana izany dia ho afaka hianatra paikady poker ianao nefa tsy very vola ary amin'ny fomba mahomby kokoa. Noho izany dia manangana sy miloka ianao rehefa milalao fa tsy miantso fotsiny ary mametraka tsindry ambony indrindra amin'ny mpifanandrina aminao. Ny fahafantaranao fa manana tombony ianao amin'ny fihazonana tanana tsara kokoa alohan'ny flop dia handresy fotsiny amin'ny karatra isan-karazany ianao amin'ny farany.
Rehefa manapa-kevitra hoe iza no tanana hilalao ao Texas Holdem, ny toeranao dia ho iray amin'ireo lafin-javatra manan-danja indrindra hodinihina. Mahazo vola bebe kokoa amin'ny toerana aoriana ianao ka miezaha milalao tanana bebe kokoa avy any. Milalao henjana avy amin'ny toerana voalohany, midira mankany amin'ny BTN ary miezaha mangalatra vilany bebe kokoa any. Amin'izao fotoana izao, ny toerana mahasoa indrindra amin'ny poker dia ny Button (BTN) ary mipetraka eo ianao dia afaka milalao tanana bebe kokoa noho ny toerana hafa. Mila fotoana kely vao zatra an'izany, fa diniho foana ny toerana misy anao rehefa manapa-kevitra hoe iza no tanana hilalao.
Ny tanjonao dia ny hianatra paikady poker ary hifantoka amin'ny fahitana ny fampahalalana rehetra. Noho izany, avelao ny multi-tabling ho an'ny ho avy, mifikitra amin'ny latabatra iray, ary miezaha maka ny fampahalalana rehetra azonao. Jereo ny lalaon'ny mpifanandrina aminao sy ny tanany amin'ny fifanandrinana. Mifantoha amin'ny fampiasana ny toerana misy anao ary milalao fomba mahery vaika ary mety hitondra anao lavitra izany.
Ny fihetseham-po dia fahavalonao eo amin'ny latabatra poker. Azo antoka fa afaka manomboka tezitra na malahelo ianao rehefa resy eo am-pilalaovana ary mila miatrika izany koa ianao, fa aza atao ratsy kokoa izany amin'ny fanombohana ny lalao rehefa malahelo ianao. Manao zavatra adala isika rehefa reraka, tezitra, na mamo mihitsy aza, ka mety handany vola be. Fadio ny manomboka ny lalao rehefa malahelo ianao ary io no voalohany, fa dingana lehibe iray ho lasa mpilalao poker tsara kokoa. Rehefa afaka miatrika ireo fihetseham-po ireo ianao dia afaka manao dingana iray lavidavitra kokoa ary maka minitra vitsivitsy hiomanana amin'ny fotoam-pivorianao alohan'ny hanombohana milalao.
Mila mahafantatra ny odds poker ianao tsy maintsy mamely ny tanana mpandresy ary inona ny vintana azonao. Ny hany tokony hataonao dia ny mandray fanapahan-kevitra mifototra amin'izany fa tsy ny fihetseham-ponao. Inona avy ireo mety ho vilany? Hevitra iray izay mamela anao hahatakatra fa mahazo ny vidiny mety hanohizana amin'ny tananao ianao ary manampy anao handray fanapahan-kevitra tsara. Ity misy lisitra haingana ny tanana Texas Holdem mahazatra indrindra ary firy ny fivoahana azonao hanatsarana tanana iray mandra-pahatongan'ny arabe manaraka:
Tifitra - 4 isa
Karatra roa ambony - 6 outs
Saripika mahitsy misokatra - 8 outs
Fizarana 9 - XNUMX isa
Sarimihetsika sy tsipìka - 12 isa
Fizarana mivantana - 15 isa
Azonao atao ny manana famantarana tsara hoe hatraiza ny mety hanatsaranao ny tananao amin'ny fampitomboanao fotsiny ny 2 raha te-hahafantatra ny mety ho tratran'ny tananao eo amin'ny arabe manaraka na ampitomboinao amin'ny 4 raha mitady ny isa ianao. hanatsara ny tananao avy amin'ny flop mankany amin'ny renirano.
Raha manana fisintonana mahitsy misokatra ianao amin'ny flop miaraka amin'ny 8 outs dia azonao isaina fa hanatsara izany ianao eo amin'ny 8 * 2 = 16% amin'ny fihodinana ary mamely mahitsy na 8 * 4 = 32% amin'ny fotoana eo amoron'ny renirano. . Tsy isa marina ireo fa tena akaiky ny marina ary izany no fomba tsara indrindra sy mora indrindra hianarana paikady poker. Eritrereto izany rehefa manapa-kevitra amin'ny fisarihana ary raiso ho zava-dehibe ity tendron'ny poker ity.
Rehefa fantatrao hoe mety, dia hanatsara ny tananao poker ianao rehefa manao fisarihana ianao dia tsy maintsy mianatra mametraka ny mpifanandrina aminao amin'ny sehatra iray. Izany dia hamela anao hahatakatra ny isan'ny outs tena anananao ary avy eo dia handray fanapahan-kevitra bebe kokoa. Antony maro no mety hanoro izay tanana mety ho lalaovin'ny mpifanandrina aminao. Lohahevitra henjana sy mandroso izy io, saingy afaka manomboka amin'ny dikan-teny tsotra ianao.
Eritrereto ny toerana misy azy, inona no tanana azony nosokafana sy nilalao avy teo
Ny fihetsik'izy ireo taorian'ny fisintahana dia afaka manoro izay mety ho azony. Ny filokana na ny fanamarinana dia mety manondro ny tanjany na ny fahalemeny ary tokony hikaroka izany fampahalalana izany ianao
Lafin-javatra lehibe tokony hodinihina ihany koa ny texture board. Ny olona dia tsy dia manana tanana matanjaka maro amin'ny boards maina raha oharina amin'ireo mifandray
Mety hanome fampahalalana fanampiny ho antsika koa ny fotoana laniny handraisana fanapahan-kevitra sy habe ampiasainy
Betsaka ny zavatra tokony hodinihina ary mila fanazaran-tena be dia be ianao vao afaka mieritreritra izany. Aza manome tsiny ny tenanao raha miady amin'izany ianao amin'ny voalohany. Araka ny voalazanay dia lohahevitra sarotra ity, izay misy boky nosoratana momba izany ka aza manantena ny hahafehy azy ao anatin'ny iray andro na herinandro. Tohizo ny milalao ary mianara paikady poker amin'ny fomba mety.
Aza zatra mandray fanapahan-kevitra ho azy. Fahadisoana goavana izany fa na ireo mpilalao efa mandroso aza dia manao fotoana be dia be ary mamono ny vintana rehetra hahazoany vola. Makà fotoana ary eritrereto ny zavatra rehetra efa noresahinay. Indrindra fa amin'ny voalohany, mety ho sahiran-tsaina ny mieritreritra ny zava-drehetra indray mandeha, toy ny toerana misy anao, ny laharan'ny tanana poker, ny karatry ny mpifanandrina sy ny maro hafa. Izany no antony tokony hifikitra amin'io tendron'ny poker io amin'ny filalaovana latabatra iray fotsiny ary haka ny fotoana rehetra ilainao handraisana fanapahan-kevitra.
Rehefa miakatra tsatòka ianao ary manomboka milalao lalao lehibe kokoa dia tsy ho safidy izany satria maro ny mpilalao no mirona milalao mahery setra kokoa any ary mi-bluff bebe kokoa, noho izany dia mila mianatra ny fomba filalaovana azy ianao. Fa amin'ny voalohany, ny mifikitra amin'ity paikady ity no tsara indrindra. Tsy ho ela dia hiakatra ianao ary manomboka milalao miaraka amin'ireo mpanohitra mitombina kokoa. Azonao atao ny mitondra ny lalaonao ho amin'ny ambaratonga manaraka amin'ny alàlan'ny fanorotoroana ny mpifanandrina aminao amin'ny fomba tsy noeritreretinao ho azo atao.
Mila mandray an'io toro-hevitra poker io amin'ny fiheverana matotra ianao. Rehefa manomboka miakatra avy any amin'ny toerana tsy misy na aiza na aiza ny mpanohitra passive izay miantso fotsiny dia tsy maintsy miforitra be ianao ary na dia ny tananao matanjaka aza. Amin'ny ankamaroan'ny fotoana, ny tanana roa na dia tsara toy ny mpivady ambony na overpair aza dia tokony hiditra ao anaty moka. Raha vao manomboka milalao ianao dia hanana olana sasantsasany amin'ny famelana ireo tanana ireo, saingy zavatra iray tokony hianaranao raha te hahomby ianao.
Ny mpilalao amin'ny lalao ambany indrindra dia tsy mamitaka loatra ary amin'ny farany, dia hanao soa lehibe ho anao ianao amin'ny alàlan'ny famoretana tanana roa ho an'ny herisetra amin'ireo toerana ireo. Tsy ny mpifanandrina rehetra no tsy mivadika ary raha toa ianao ka milalao amin'ny maniac na olona tena masiaka sy manandratra tsy tapaka dia tsy tokony hamoritra tanana ianao. Mila mahatakatra ianao fa misy karazana mpilalao samihafa ary tena mila milalao amin'ny fomba hafa ianao hanohitra azy ireo.
Raha te ho afaka hifaninana amin'ny mpilalao ianao na dia amin'ny tsatòka ambany kokoa aza, dia tokony hahazo fanampiana ianao. Tsy miresaka momba ny programa mandroso izay afaka manampy anao hianatra tetikady GTO poker izahay, fa tsotra iray izay tokony hananan'ny mpilalao tsirairay. Tena ilaina ny rindrambaiko fanaraha-maso satria afaka mahita antontan'isa momba ny mpifanandrina aminao ianao ary mahafantatra ny filalaovany. Mamela anao hahita haingana ireo karazana mpanohitra izay hatrehinao ary hanova ny paikadin'ny pokero sy ny fanapahan-kevitra mifototra amin'izany.
Mihevitra izahay fa ireto no toro-hevitra poker manan-danja indrindra tokony horaisinao rehefa manomboka. Hanampy anao hianatra paikady poker haingana kokoa izany ary hiaro anao amin'ny fahadisoana mahazatra maro ataon'ny mpilalao.